China Mpaghara Ogige Ebe China Manufacturers & Suppliers & Factory
Mpaghara Ogige Ebe - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Mpaghara Ogige Ebe)
Mgbidi Mgbidi na-ebute n'Ọdọ Mmiri Elu Gburugburu
Mgbidi Mgbidi na-ebute n'Ọdọ Mmiri Elu Gburugburu Ọ dịghị mkpa iji aka na-arụ ọrụ iji mee ka PostLọp Post dị ka ebe a na-arụ ọrụ n'ime igwe foto na-achọpụta ìhè iji mee ka ọ gbanye. Ejikọta ya na 250W ndị na-enye ìhè ọkụ, 75W Led Pole Top Light na- enye gị ike rụọ ọrụ nke ọma 9750lm nnukwu elu na-enwupụta ihe...
25W Igwe Mmiri nke Gburugburu Ebe E Si Nweta Ọdụm
Nke a nile na- ekpo ọkụ nke anyanwụ na-acha ọkụ na -eme ka ọ dị n'elu ugwu. 25Wenwu n'anyanwụ nke anyanwụ dị mma maka onye ọ bụla chọrọ ịchọta mmanụ ma ọ bụ ọkụ eletrik ma ọ bụ maka nrụnye ọhụrụ. Nke a pụrụ iche na- enwu gbaa ejiri ya na SMD LED nke nyere 3750 Lumens na njuputa zuru ezu. Ngwá ọrụ nke ìhè...
25W Mpaghara ebe nchekwa anyanwụ na-enwu ọkụ maka ụgbọala ụgbọala
Nke a nile nke 25W Nwuo Igwe Mbara maka Ọdụm ụgbọala Ezubere iji rịgoro n'elu ogige dị. 25W Igwe Ọdụ Ụgbọ Mmiri nke Ogwe Ọdụm dị mma maka onye ọ bụla chọrọ ịchọta mmanụ ma ọ bụ ọkụ eletrik ma ọ bụ maka nrụnye ọhụrụ. Ewu ọkụ a Gburugburu ebe a dabara na SMD LEDs nke nyere 3750 Lumens na njirimara zuru ezu. Igwe ọkụ...
Mpaghara Ogige Ebe 20W Eghala Ogige Ubi Mpaghara ebe ahia Mpaghara Ngwunye 50 L Edemede Mpaghara Ebe E Debere 50W Edemede Mpaghara Ebe Mpaghara Ngwadogwu Na-aga Mbara Igwe Uhie